Lapho Kufanele Ucwaninge, Ucwaninge, futhi Ulahle Izixhumanisi Ezingemuva Ukuze Uthuthukise Amazinga Osesho | Martech Zone
Lapho Kufanele Ucwaninge, Ucwaninge, futhi Ulahle Izixhumanisi Ezingemuva Ukuze Uthuthukise Amazinga Osesho
NgoLwesibili, Novemba 2, 2021 NgoLwesibili, Novemba 2, 2021 Douglas Karr
Bengisebenzela amaklayenti amabili ezifundeni ezimbili enza umsebenzi ofanayo wasekhaya. I-Client A yibhizinisi elisunguliwe elinesipiliyoni seminyaka engaba ngu-40 esifundeni sabo. Iklayenti B lisha lineminyaka engaba ngu-20 yesipiliyoni. Siqede ukusebenzisa isayithi elisha ngokuphelele ngemuva kokuthola ikhasimende ngalinye elithole amasu okusesha akhathazayo avela ezinhlanganweni zawo.
Izibuyekezo - Ama-ejensi ashicilele amakhulukhulu amakhasi ngamanye anokubuyekezwa okukodwa kokukodwa okuqukethe okuncane ngaphandle kwesevisi kanye nemisho embalwa ekubuyekezweni. Bekusobala ukuthi inhloso yabo lapha bekuwukuzama ukusebenzisa amagama angukhiye ngendawo kanye nesevisi enikeziwe.
Amakhasi Esifunda - Ama-ejensi ashicilele inqwaba yamakhasi angaphakathi analokho aphinda okuqukethwe kwesevisi yasekhaya enikeziwe kodwa acacisa idolobha noma isifunda esihlukile esihlokweni nasemzimbeni. Umgomo lapha ubufana… ukuzama ukusebenzisa amagama angukhiye wendawo kanye nesevisi enikeziwe.
Angisho ukuthi leli yiqhinga lokuthi angikwazanga ukusetshenziswa, bekuwukuqaliswa okusobala nokubusha kokuqukethwe okuqondiswe esifundeni kanye nenkonzo. Angiyena umlandeli waleli su nakancane, sithole impumelelo emangalisayo ngokumane sichaze izindawo zesevisi ngaphansi, okuhlanganisa ikheli lezindawo zebhizinisi ngaphansi, okuhlanganisa nenombolo yocingo (enendawo yendawo. code), bese kushicilela imininingwane eqinile emzimbeni wekhasi mayelana nesevisi.
Asikho nhlobo isizathu sokuthi kungani ikhasi elifulelweyo, ngokwesibonelo, lingakwazi ukubekwa kahle ku-“Roofing Contractor” kuzo zonke izifunda lapho usonkontileka asebenza khona. Ngingamane ngisebenzele ukuthuthukisa kanye nokwenza kahle ikhasi elilodwa lokufulela kunokuba kudingeke. dala futhi ulandelele amakhasi amaningi eklayenti.
Okubi kakhulu kunakho konke, womabili la makhasimende empeleni abengatholi noma yimuphi umkhondo ngesayithi lawo futhi amazinga awo abengakagudluki esikhathini esingaphezu konyaka. Futhi, ama-ejensi abo ahlukene angabanikazi besayithi kanye ne-ejensi eyodwa umnikazi wesizinda kabushagistration. Ngakho... yonke imali ababeyitshala yayingabasondezi ekukhuliseni ibhizinisi labo. Banqume ukunikeza inkampani yami ithuba lokusebenzisa isu elisha.
Kuwo womabili amaklayenti, sisebenze ukuthuthukisa usesho lwabo lwendawo ukubonakala ngokwakha isiza esisha esithuthukisiwe, ukuthatha i-drone nangaphambi/ngemuva kwezithombe zomsebenzi wabo wangempela esikhundleni sokuthatha izithombe zesitoko, kwaqalwa imikhankaso yokuthwebula isibuyekezo, kwabahlukanisa kwabaqhudelana nabo, kwaqondisa kabusha izinkulungwane zezixhumanisi zangaphakathi emakhasini afanele, futhi sisebenzela ukukhulisa ukufinyelela kwabo ku-YouTube, kwezenhlalo, kunkhombandlela, nasezinhlwini zemibhalo zosonkontileka babakhiqizi.
Nini Ukwenza Ukuhlolwa Kwe-Backlink
Okulandelayo okwenzekile kwaba ukuthi:
Iklayenti A – ebesisebenze isikhathi eside kunabo bonke, bebengathuthukisi ukubonakala kwenjini yabo yokusesha ngaphandle kwamagama angukhiye anegama. Siqhubekile nokuthuthukisa amakhasi, axhunywe ku-YouTube, sabuyekezwa izinkomba ezingaphezu kuka-70… futhi akusanyakazi lutho. Ukhiye wayebona amagama angukhiye angenawo uphawu anganyuki… konke kugqitshwe ekhasini lesi-5 noma ngaphezulu.
Iklayenti B - kungakapheli isonto beshicilele isayithi labo babike ukuthi bathola imikhondo emihle, futhi amazinga abo akhuphuka okungekho uphawu amagama asemqoka.
Ngemva kokucwaninga ukuncintisana kwabo nokuthuthukisa amakhasi abo amasonto, kudingeke sijule ukuthi kungani Iklayenti A yayinganyakazi. Ngenxa yamasu angabazekayo asevele esetshenzisiwe, besifuna ukubheka ikhwalithi yama-backlink kusayithi labo. Kwase kuyisikhathi sokwenza a ukuhlolwa kwe-backlink!
Ukuhlolwa kwe-backlink kukhomba zonke izixhumanisi kusayithi labo noma amakhasi angaphakathi nokuhlaziya ikhwalithi yamasayithi lapho i-backlink ikhona. Ukuhlolwa kwe-Backlink kudinga inkampani yangaphandle Ithuluzi le-SEO... futhi ngiyasebenzisa Semrush. Ngalokhu kuhlola, ungakwazi ukuhlonza izixhumanisi ezivela kumasayithi ekhwalithi ephezulu kanye nama-backlink amabi (owaziwa nangokuthi anobuthi) okufanele uwasuse noma wazise i-Google.
Yiziphi Izixhumanisi Ezingalungile?
Nansi ividiyo yokubuka konke okuhle kwama-backlink nokuthi yiziphi izixhumanisi ezimbi, ukuthi zisetshenziswa kanjani abasebenzisi be-blackhat SEO, kanye nokuthi kungani bephula imigomo ye-Google futhi kufanele kugwenywe ngazo zonke izindleko.
I-Backlink Audits kanye ne-Diavowing Backlinks
Ukusebenzisa SemrushUkuhlolwa kwe-backlink, sikwazile ukubona ngokucacile izizinda namakhasi abhekisela kusayithi labo:
Sicela ugcine engqondweni ukuthi amathuluzi afana Semrush ziyamangalisa kodwa azikwazi ukuhlaziya zonke izimo kuwo wonke amaklayenti. Kunomehluko omkhulu, ngokwezibalo, phakathi kwebhizinisi elincane lendawo kanye nesevisi yamazwe ngamazwe noma yezilimi eziningi ku-inthanethi. Lawa mathuluzi ajwayele ukuphatha kokubili ngokulinganayo engikholelwa ukuthi kuwumkhawulo onzima. Kulesi simo saleli klayenti:
Inani Eliphansi - Nakuba lo mbiko uthi, ephelele, Angivumi. Lesi sizinda sinenani eliphansi lama-backlinks aphelele ngakho ukuba ne-backlink eyodwa enobuthi ngempela - ngokubona kwami ​​- bekuyinkinga.
Quality - Ngenkathi isixhumanisi esisodwa kuphela esichazwe njenge anobuthi, Ngithole ezinye izixhumanisi ezimbalwa ezazikhona umsolwa ngaphakathi kocwaningomabhuku kodwa amakwe ngaphansi komkhawulo onobuthi njengo Ephephile. Zazisemakhasini ayengafundeki, ezizindeni ezazingenza umqondo, futhi lokho akuzange kulethe ithrafikhi ebhekisela kusayithi.
I-Google inikeza indlela yokubazisa uma lezi zixhumanisi ezimbi zikhona, inqubo yaziwa ngokuthi a disavow. Ungalayisha ifayela lombhalo elilula elinohlu lwezizinda noma ama-URL ofisa ukuwayeka ohlwini lwe-Google lapho unquma ukuthi isayithi lakho kufanele libekwe kanjani.
Disavow - Ngifunde izindatshana ezimbalwa ku-inthanethi lapho ochwepheshe be-SEO basebenzisa amathuluzi e-disavow ukubika ngokukhululekile amathani ezizinda namakhasi ku-Google. Ngiyaqaphela kancane endleleni yami... ngihlaziya isixhumanisi ngasinye ngekhwalithi yesayithi, ithrafikhi ebhekisela kuyo, izinga layo lilonke, njll. Ngiyaqinisekisa ukuthi ama-backlink amahle ashiywe wodwa futhi izixhumanisi ezingabazekayo nezinobuthi kuphela ezinqanyuliwe. Ngokuvamile ngikhetha ohlangothini lokulahla sonke isizinda kunekhasi futhi.
Esikhundleni sokusebenzisa ithuluzi le-Google le-disavow, ungazama futhi ukuthintana nomnikazi wesizindalwazi ukuze asuse isixhumanisi… kodwa kulawa masayithi angogaxekile, anobuthi, ngiye ngathola ukuthi akukho mpendulo noma alukho nhlobo ulwazi lokuxhumana.
Amathuluzi we-Semrush Disavow
Amathuluzi atholakala nge-Semrush acatshangelwe kahle ngempela ukugcina isayithi lakho noma amaklayenti akho amaphrofayili e-backlink. Ezinye zezici ithuluzi elizihlinzekayo:
Uhlolojikelele – ukubika okubona ngenhla.
I-Audit – uhlu olubanzi lwazo zonke izixhumanisi zangemuva ezitholakele kusayithi lakho, ubuthi, ikhasi lendawo, umbhalo we-anchor, kanye nezenzo ongazithatha, njengokukugunyaza noma ukwengeza isizinda noma ikhasi efayeleni lombhalo we-disavow.
Disavow - ikhono lokulayisha ifayela lakho lamanje le-disavow lesayithi noma ukulanda ifayela elisha le-disavow ukuze lilayishwe ku-Google Search Console.
Tracking - ngokuhlanganiswa kwe-Google Search Console kanye ne-Google Analytics, i-disavow yakho manje ingalandelelwa ngaphakathi kwakho Semrush iphrojekthi ukubona umthelela enawo.
Nasi isithombe-skrini se- ukuhlolwa kwe-backlink … Bekumele ngisuse imininingwane yeklayenti esizindeni, ithagethi, kanye nombhalo oqinile njengoba ngingafuni ukuncintisana ngokubona ukuthi ngisebenza ngobani.
Ifayela lombhalo we-disavow u-Semrush akwakhela futhi akugcinele lona lilungile, eliqanjwe nosuku futhi afaka amazwana efayeleni:
Isinyathelo esilandelayo ukulayisha ifayela. Uma ungakwazi ukuthola Ithuluzi le-Google le-Disavow kukhonsoli yosesho, nasi isixhumanisi lapho ungalayisha khona ifayela lakho lombhalo le-Disavow:
Izixhumanisi ze-Disavow zekhonsoli yosesho lwe-Google
Ngemva kokulinda amaviki angu-2-3, manje sesibona ukunyakaza kwamagama angukhiye angewona amabhrendi. I-disavow iyasebenza futhi iklayenti manje seliyakwazi ukukhulisa ukubonakala kwalo kosesho olungelona uphawu.
Ungalokothi Ukhokhele Izixhumanisi Ezingemuva
Ukuqagela kwami ​​​​ukuthi inkampani yokugcina ebiphethe isiza seklayenti yayenza ukuxhumanisa okukhokhelwayo ukuzama ukuthuthukisa izinga layo lilonke. Leli yibhizinisi eliyingozi… kuyindlela enhle yokuxoshwa yikhasimende lakho futhi ucekele phansi ukubonakala kwenjini yokusesha. Ngaso sonke isikhathi funa ukuthi i-ejensi yakho idalule ukuthi ngabe benza lolo hlobo lomsebenzi ngaphambilini.
Empeleni ngenze ucwaningo lwe-backlink lwenkampani eyayihamba esidlangalaleni futhi eyayitshale imali eningi enkampanini ye-SEO eminyakeni edlule. Ngikwazile ukulandelela kalula izixhumanisi emuva xhuma amapulazi bebezakhela ukukhulisa ukubonakala kwamakhasimende abo. Iklayenti lami ngokushesha layiyeka inkontileka futhi labe selingitshela ukuthi ngisebenze ekunqamuleni izixhumanisi. Ukube izimbangi, abezindaba, noma i-Google ihlonze lezo zixhumanisi, ibhizinisi laleli klayenti belizocekelwa phansi… ngokwezwi nezwi.
Njengoba ngichazele iklayenti lami… uma ngikwazi ukulandelela izixhumanisi ngibuyela enkampanini yabo ye-SEO ngamathuluzi afana nalokhu Semrush. Ngiyaqiniseka ukuthi izinkulungwane zama-PhDs wokwakha ama-algorithms kwaGoogle nawo angakwazi. Bangase bakhuphule izinga ngesikhathi esifushane, kodwa ekugcineni babezobanjwa bephula Imigomo Yesevisi ye-Google futhi - ekugcineni - balimaze umkhiqizo wabo ngendlela engenakulungiseka. Ingasaphathwa yezindleko ezengeziwe zokuthi ngenze ucwaningo, i i-backlink forensics, bese kuba ama-disavows ukuwagcina entanta.
Indlela ekahle yokuthola ama-backlinks iwukuba bazuze. Yakha okuqukethwe okuhle kuyo yonke imidiya, wabelane futhi ukhuthaze okuqukethwe okuhle kuzo zonke iziteshi, futhi uzozuza ama-backlink amangalisayo. Kungumsebenzi onzima kodwa abukho ubungozi bokutshala imali okwenzayo.
Uma uhlangabezana nesikhathi esinzima futhi udinga usizo oluthile, sisiza amaklayenti ambalwa ngemizamo yawo yokuthuthukisa injini yokusesha. Buza okwethu Ukubonisana kwe-SEO esizeni sethu.
Ukudalula: Ngingumsebenzisi wamandla futhi ngiyinxusa eliziqhenyayo Semrush futhi ngisebenzisa izixhumanisi zami ezihambisanayo kuso sonke lesi sihloko.
Tags: ukuhlolwa kwe-backlinki-backlink forensicsiphrofayli ye-backlinkukuxhuma emuvaama-backlinksizixhumanisi ezingemuva ezingezinhleizixhumanisi ezimbidisavowi-google search consoleindlela yokwenza ukuhlolwa kwe-backlinkindlela yokucwaninga ama-backlinksisixhumanisi ubuthilink forensicslinkresearchama-backlink akhokhelweukusebenzisa ngokugcwele injinisemrushSemrush backlink amathuluziseoama-backlink anobuthi
Izibalo Zokusetshenziswa Kwe-inthanethi 2021: Idatha Ayilali 8.0
I-SellerSmile: Kungani Kufanele Ukhiphe Ithimba Lakho Lokusekela I-Ecommerce
Mar 5, 2013 ku-1: 46 PM
Kufana nokuthi uyazi ukuthi bengikwenza lokhu kusihlwa. Ngihlanze wonke ama-backlinks kepha ngiya ekhasini lasekhaya lesayithi ngokushintsha ama-URL hhayi ukuwa-301 - i-PITA enkulu. Kuzothatha izinyanga kepha yingakho ngithola isigqoko esimnyama esimpunga.
Kuzofanele ngingavumeli ikhasi lasekhaya
Sep 6, 2013 ku-11: 31 AM
Kuyindlela elula womlingani. Vele ungene ngemvume ku-LinkResearchTools nokunye abazokwenza ngokuzenzakalela. Ngifunde indatshana emayelana nokuthi ungayibalekela kanjani iPenguin ngezindlela ezenziwa ngesandla. http://www.technologyace.com/internet-marketing/seo/recover-blogwebsite-google-latest-penguin-2-0-update/
Nov 27, 2013 ngo-6: 42 AM
Lapho ngisebenzisa i-Link Research ne-Link Detox ngaphoxeka kakhulu ngenkonzo nomphumela. Akukho okuningi okwenzekile, futhi angizange nginikezwe usizo oluningi lapho ngiludinga. Nginqume ukusebenzisa ama-The Link Auditors ukulungisa ama-backlinks ami ngemuva kokubona izibuyekezo ezinhle kakhulu ezinkundleni ezahlukahlukene. Inkonzo yabo ibingcono kakhulu! Baneqembu elihlala likhona ukukusiza ngemibuzo noma ngezeluleko. Ngisebenzisa amathuluzi we-The Link Auditors, ngikwazile ukuthola zonke izixhumanisi zami ezinobuthi, ngazisusa ngokuphelele. UJason, ilungu leqembu engikhulume nalo, ubelusizo olukhulu ekusekelweni kwefoni. Wayelalela izinkinga zami futhi echaza kahle ukuthi yini engalungile. Lapho esekwenzile lokhu wangitshela ukuthi yimaphi amathuluzi azongisebenzela kangcono.
Ngisebenzisa amathuluzi we-The Link Auditors, ngithole imininingwane eningiliziwe, bengibona kahle ukuthi iziphi izixhumanisi ezingangilimaza futhi ngangazi ukuthi iziphi izixhumanisi ezidinga ukususwa. Ukusebenzisa ithuluzi labo lokususa kwakulula kakhulu njengoba kuzenzakalela ngokuphelele futhi kushesha kakhulu. Ngisebenzise amathuluzi ahlukahlukene wokususa abekade etholakala ku-inthanethi, futhi awabo bekungcono kakhulu!
Nov 28, 2013 ngo-4: 31 AM
Ngisebenzise ne-The Link Auditors futhi. Bangisize kakhulu ekucwaningweni kwami ​​mabhuku, banginikeza usizo lapho ngiludinga futhi bangichazela nangengxaki yami. Siyabonga ngokuthumela lokhu njengoba ngicabanga ukuthi abantu abaningi kufanele bazi ngabo. Insizakalo abayinikezayo imnandi nje, inokwethenjelwa futhi kulula ukuyenza.